Suldaan Nayruus | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 7
Maalin baa wiil waxa uu arkay gabar sawirkeeda soo dhigtay Faysbuuggeeda, kolkaas buu sawirkii saaray ʻLikeʻ isla markaasina ʻCommentʻ qurux badan u raaciyey. Gabadhaasi uguma jirin isaga Faysbuuggiisa e, kuwa isaga saaxiib la ah ayey ugu jirtay oo, Timeline kooda ayuu ka arkay. Gabadhii markii ay aragtay faallada qurxoon ee uu wiilku ka bixiyey ba, isna mahadcelin qurux badan ayey siisay. Intaas ugama aysan harine, waa ay ku soo darsatay, isna waa uu ka aqbalay. Gabadhu waxa ay ahayd gabar Faysbuug aad u isticmaasha, mar kastana wax soo gelisa, isaguna, maalintii ay ku soo darsatay wixii ka bilawday, wax …
Buugga koowaad: nin qoraa ah, ayaa waxa uu buug ka qoray oday Soomaaliyeed (oo xog badan hayey) oo uu muddo dhan ag fadhiyey si uu buggaas u dhammeeyo inta uu nool yahay. Buuggii ayuu inta daabacay suuqa soo geliyey. Buuggii xiiso fiican buu yeeshay, macaamiil badan oo odaygaas danaynaysayna waa uu helay. Cajabta dhacday, isku qolo ma aysan ahayn ninka buugga qoray iyo odayga laga qoray. Wiil iyo gabar uu odaygaasi adeer u ahaa oo hanti haystay baa arkay buugga adeerkood laga qoray oo, welibana si fiican u qoran isla markaasina la jeclaystay. Inta nuqul buuggii ka mid ahaa …